Urolithin B budada ugu fiican （1139-83-9） Soo saaraha & warshad
Budada Urolithin B
Cofttek waa soosaaraha budada Urolithin B ee ugu fiican Shiinaha. Warshadeena waxay leedahay nidaam maareyn wax soo saar oo dhameystiran (ISO9001 & ISO14001), oo leh awood wax soo saar bille ah oo ah 200kg.
Name: Urolitin B
Magaca kiimikada: 3-Hydroxy-6H-dibenzo [b, d] pyran-6-one
Caanaha Kiimikada: C13H8O3
Miisaankani waa: 212.2 g / mol
Keydka InChi: Wxuqmtrhthpnopnoxbv-udfffayoysa-n
NOLOSHADA SMILES: O=C1C2=CC=CC=C2C3=CC=C(O)C=C3O1
function: Urolithin B waxay hagaajin kartaa shaqada mitochondrial iyo shaqada muruqyada.
Urolithin B waxay hagaajin kartaa xoogga murqaha iyo adkeysiga inta lagu jiro da'da.
Codsiga: Urolithin B waa dheef-shiid kiimikaad maaddada microbial-ka ah ee loo yaqaan 'ellagitannis' wuxuuna muujiyaa firfircooni firfircoon oo ka-hortagga sunta-jirka iyo dhaqdhaqaaqa ka-hortagga jirka ee ku xiran nidaamka deynta iyo shuruudaha. Urolithin B sidoo kale waxay soo bandhigi kartaa waxqabadka estrogenic iyo / ama waxqabadka anti-estrogenic.
Xalka: Si fudud ayaa loogu millaayaa N, N-dimethylformamide iyo dimethylmethylene. Sulfone, oo waxoogaa ku milma methanol, ethanol, iyo ethyl acetate
Kaydinta Nabadgelyada: Hygroscopic, -20 ° C Qaboojiyaha, Ka hooseeya jawiga gudaha
Xaaladda Maraakiibta: Nadiifi heerkulbeegyada heerkulka sida kiimiko aan halis lahayn. Badeecadani waa mid xasilloon oo ku filan muddo toddobaadyo ah inta lagu jiro maraakiibta caadiga ah iyo wakhtiga lagu kharash gareeyo.
Urolitin B Spectrum NMR
Urolithins waa dheef-shiid kiimikaadka labaad ee ellagic acid ka soo jeeda ellagitannins. Bini'aadamka ellagitannins waxaa loo beddelaa microflora gut oo loo yaqaan 'ellagic acid' oo loo sii beddelo urolithins A, urolithin B, urolithin C iyo urolithin D oo ku jira mindhicirada waaweyn.
Urolithin A (UA) waa dheef-shiid kiimikaadka ugu badan ee ellagitannins. Si kastaba ha noqotee, urolithin A lama yaqaan inay si dabiici ah ugu dhacdo ilo cunto kasta.
Urolithin B (UB) waa dheef-shiid kiimikaad badan oo laga soo saaray mindhicirka iyada oo loo marayo isbeddelka ellagitannins. Urolithin B waa sheyga ugu dambeeya ka dib dhamaan waxyaabaha kale ee ka soo baxa urolithin waa la kaydiyaa. Urolithin B waxaa laga helaa kaadida oo ah urolithin B glucuronide.
Urolithin A 8-Methyl Ether waa badeecada dhexdhexaadka ah inta lagu gudajiro soo saarista Urolithin A. Waa dheef-shiid kiimikaad sare oo muhiim ah ellagitannin waxayna leedahay astaamo antioxidant iyo anti-bararka.
Mashruuca ficilka urolithin A iyo B
Rol Urolithin A ayaa dhalisa mitophagy
Mitophagy waa hal nooc oo iskeed ah oo caawisa ciribtirka mitochondrial waxyeelo soo gaartay shaqadooda ugu fiicnaa. Cudurka loo yaqaan 'autophagy' waxaa loola jeedaa nidaamka guud ee ay ku saleysan tahay cilmiga 'cytoplasmic' oo ku liitay isla markaana dib loo warshadaynayo halka mitophagy-ga uu yahay nabaad-guurka iyo dib-u-warshadaynta mitochondria.
Inta lagu jiro da'da hoos u dhaca autophagy waa hal dhinac oo horseedaya hoos u dhaca shaqada mitokondria. Dheeraad ah, diiqadda oksidheer waxay sidoo kale u horseedi kartaa autophagy hooseeya. Urolithin A waxay leedahay awooda baabi'inta mitochondria ee waxyeelada leh iyada oo loo marayo autophagy xulashada.
Properties Waxyaabaha Antioxidant
Walwalka Oxidative wuxuu dhacaa marka ay jirto isku dheelitir la'aan udhaxaysa xagjirnimada xorta ah iyo antioxidant-ka jirka. Kuwaas xag-jirka ah ee bilaashka ah waxay badanaa la xiriiraan cudurro badan oo raaga sida cudurada wadnaha, sokorowga iyo kansarka.
Urolithins A iyo B waxay soo bandhigaan saameynta antioxidant-ka iyagoo adeegsanaya awoodooda yareynta xagjirnimada lacag la’aanta ah iyo gaar ahaan heerarka oksijiinta firfircoonida ah ee loo yaqaan 'intracellular reactive noocyada oksijiinka (ROS) iyo sidoo kale waxay xayirayaan peroxidation-ka lipid ee noocyada unugyada qaarkood.
Dheeraad ah, urolithins waxay awood u leedahay inay joojiso qaar ka mid ah enzymes oxidized, oo ay ku jiraan monoamine oxidase A iyo tyrosinase.
Properties Waxyaabaha anti-bararka
Caabuqu waa geedi socod dabiici ah oo jirkeenu la dagaallamo wax kasta oo dhaca sida infekshannada, dhaawacyada, iyo microbes. Si kastaba ha noqotee, caabuq daba-dheer ayaa waxyeello u leh jirka maxaa yeelay tani waxay la xiriirtaa cilado kala duwan sida neefta, arrimaha wadnaha, iyo kansarka. Caabuq dabadheeraad ah ayaa dhici kara sababo la xiriira caabuq ba'an oo daran, infekshanno ama xitaa xagjirnimo lacag la’aan ah oo jirka ku jirta.
Urolithins A iyo B waxay soo bandhigaan guryaha ka hortagga caabuqa iyagoo horjoogsanaya wax soo saarka nitric oxide. Waxay si gaar ah u xakameynayaan borotiinka loo yaqaan nitric oxide synthase (iNOS) iyo muujinta mRNA ee iyagu mas'uul ka ah caabuqa.
Effects Saamaynta anti-microbial
Microbes ay ku jiraan bakteeriyada, fangaska iyo fayrasku waxay si dabiici ah uga dhacaan deegaanka iyo xitaa jidhka bini-aadamka. Si kastaba ha noqotee, dhowr microbes oo loo yaqaan 'pathogens' ayaa sababi kara cudurro faafa sida hargabka, jadeecada iyo duumada.
Urolithin A iyo B waxay awoodaan inay soo bandhigaan waxqabad kahortaga dawada iyagoo ka horjoogsanaya dareemayaasha kororka. Aaladda Quorum waa hab isgaarsiinta bakteeriya u suurtagelisa bakteeriyada inay ogaato oo xakameyso geedi socodka la xiriira infakshanka sida virulence iyo motility.
Ka-hortagga glycation-ka borotiinka
Glycation waxaa loola jeedaa ku xirnaan aan-ahayn enzymatic sonkorta oo loo yaqaan lipid ama borotiin. Waa astaan-tilmaameedka muhiimka ah ee sonkorowga iyo cilado kale iyo sidoo kale gabowga.
Cilmiga borotiinka ee sareeya waa saameynta labaad ee hyperglycemia waxay door weyn ku leedahay cudurada wadnaha la xiriira sida sokorowga iyo cudurka Alzheimers.
Urolithin A iyo B waxay leeyihiin guriyaal ka hortagga glycative-ka kuwaas oo qiyaas ahaan ku-tiran kuwa ka madax bannaan waxqabadkooda antioxidant-ka.
Faa'iidooyinka Urolithin B
Kaabayaasha 'Urolithin B' sidoo kale waxay leeyihiin dhowr faa'iidooyin caafimaad oo badankooduna la mid yihiin faa'iidooyinka urolithin A.
(1) Kahortaga kansarka
Astaamaha anti-bararka ee urolithin B ayaa ka dhigaya musharax wanaagsan la dagaalanka kansarka. Baarayaasha qaar ayaa soo sheegay suurtogalnimada ku jirta fibroblasts, microphages iyo unugyada endothelial.
Daraasadaha ayaa sheegay in UB ay xannibto noocyo kala duwan oo kansar ah sida qanjirka 'prostate', qanjirka 'cancer' iyo kaadiheysta kaadiheysta.
Daraasad la xiriirta unugyada kansarka mindhicirka aadanaha, ellagitannins, ellagic acid iyo urolithins A iyo B ayaa lagu qiimeeyay awoodooda ka hortagga kansarka. Waxay soo sheegeen in daaweynta oo dhan ay awood u yeesheen inay horjoogsadaan koritaanka unugyada kansarka. Waxay xanibeen unugyada kansarka inay ku bataan wareegga wareegga unugyada marxalado kala duwan iyo sidoo kale iyaga oo soo saaray apoptosis.
(2) Waxay gacan ka geysan kartaa la dagaallanka walaaca oksida
Urolithin B wuxuu leeyahay astaamo antioxidant aad u fiican iyadoo la yareynayo heerarka noocyada oksijiinta ee falcelinta leh iyo xinjirowga dhiigga ee noocyada unugyada qaarkood. Heerarka sare ee ROS waxay la xiriiraan cilado badan sida cudurka Alzheimers.
Daraasad lagu sameeyay unugyada neerfayaasha ee loo yaqaan 'oxidative stress', urolithin B dheeri ah iyo sidoo kale urolithin A ayaa laga helay inay unugyada ka ilaaliyaan sunta sababta oo ah waxay kordhiyeen badbaadada unugyada.
(3) Urolithin B xagga xoojinta xusuusta
Urolithin b ayaa la soo sheegay inuu wanaajinayo iska caabinta dhiiga. Tani waxay kor u qaadeysaa shaqeynta garashada.
Daraasadaha ayaa muujinaya in urolithin B uu noqon karo mid kor u qaadi kara xusuusta asaga oo wanaajinaya shaqada guud ee garashada.
(4) Waxay kahortagtaa muruq la’aanta
Lumitaanka muruqyada ayaa u dhici kara sababao kala duwan sida cilado, gabow iyo yaraanta borotiinka kujira cuntada. Tallaabooyin dhowr ah oo lagu joojinayo, lagu xadidayo ama looga hortagayo murqaha oo ay ka mid yihiin, jimicsi, daroogooyin iyo amino acids iyo sidoo kale polyphenols waa la shaqaysan karaa.
Urolithins waxaa loo kala saari karaa polyphenols waxayna door ka ciyaaraysaa kahortaga muruqa luminta iyadoo la dhaqaajinayo isku-darista borotiinka muruqyada iyo sidoo kale gaabinta xaalufinta.
Daraasad lagu sameeyay jiirarka, Urolithin B kaabayaasha la maareynayay muddo waqti ah ayaa lagu ogaadey inay kobcinayso murqooda maadaama muruqyada la arkay inay sii weynaanayaan.
(5) Urolithin B wuxuu la dagaallamaa caabuq
Urolithin B waxay leeyihiin astaamaha anti-bararka iyagoo yaraynaayo calaamadaha caabuqa.
Daraasad lagu sameeyay jiirka oo ay kujiraan kelyaha libiya, urolithin B waxaa lagu ogaaday in ay yareynayso dhaawaca kelyaha. Waxay kor u qaadday shaqada kelyaha, cilmiyada kalyaha iyo sidoo kale waxay yareysay calaamadaha dhaawaca kelyaha. Tani waxay muujineysaa in UB ay yareysay caabuqa kelyaha.
(6) Faa'iidooyinka isku xidhka ah ee urolithin A iyo B
Saamaynta isdhexgalka ayaa sidoo kale lagu soo warramey isku darka urolithin A iyo B ee shaqada garashada iyo kartida. Daraasadu waxay sheegtey in isku darkaan loo isticmaali karo daaweynta ama looga hortago xanuunada la xiriira asaasaqa sida walwalka ama cudurka Alzheimers.
Faa'iidooyinka kale ee la xiriira urolithins waa;
Ameliorates metabolism syndrome
Urolithin A iyo isha cuntada ee B
Urolithins looma yaqaan inay si dabiici ah looga helo ilaha cuntada laga helo. Waxay yihiin wax soo saar isbeddela acids acids-ka oo laga sameeyay ellagitannins. Ellagitannins waxaa loo beddelaa acids acids-ka iyadoo loo yaqaan 'microbiota gut' iyo aalladda 'ellagic acid' ayaa loo beddelaa dheef-shiid kiimikaadkeeda (urolithins) xiidmaha waaweyn.
Ellagitannins waxay si dabiici ah ugu dhacdaa ilaha cuntada sida rumaanka, berry ay ka mid yihiin strawberries, raspberries, cloudberries iyo blackberries, canabka muscadine, yicib, guavas, shaah, iyo lowska sida lowska iyo xabadka iyo sidoo kale cabitaanada oak-da loo yaqaan tusaale ahaan khamri cas iyo wiswis foosto geedkii.
Sidaa darteed waxaan ku soo gabagabeyn karnaa urolithin A cuntooyinka iyo urolithin B waa cunnooyinka hodanka ku ah ellagitannin. Waxaa xusid mudan in biollavailability ellagitannin uu aad u xaddidan yahay halka dheef-shiid kiimikaadkiisa labaad (urolithins) ay si fudud loo heli karo.
Daaweynta Urolithins iyo wax soo saarka ayaa ku kala duwan shakhsiyaadka tan iyo markii loo beddelay ellagitannins ay ku tiirsan tahay microbiota ee mindhicirka. Waxaa jira bakteeriya qaas ah oo ku lug leh isbadalkan waxayna ku kala duwan yihiin shakhsiyaadka halka qaarkood ay leeyihiin microbiota habboon, sare ama yar. Ilaha cuntada sidoo kale waxay ku kala duwan yihiin heerarkooda ellagitannins. Sidaa awgeed faa'iidooyinka ka iman kara ellagitannins way ku kala duwan yihiin shakhsiyaadka kale.
Kaabayaasha Urolithin A iyo B
Urolithin A supplements iyo sidoo kale Urolithin B supplements waxaa si fudud looga helaa suuqa sida ellagitannin-hodanka ah ilaha cuntada. Kaabayaasha Urolithin A sidoo kale waa la heli karaa. Badanaa rummaannada siyaadada ah si ballaaran ayaa loo iibiyay loona isticmaalay si guul leh. Kaabayaashaan waxaa laga soosaaray miraha ama lowska waxaana loo sameeyay qaab dareere ama budo ah.
Sababtoo ah kala duwanaanshaha ku-urursanaanta 'ellagitannins' ee cunnooyinka kala duwan, macaamiisha urolithin ayaa iibsada iyada oo la tixgelinayo ilaha cuntada. Isla sidaas ayaa lagu dabaqayaa marka la shiidayo budada urolithin B ama dareeraha.
Daraasadaha yar ee daaweynta bini'aadamka ee lagu sameeyay budada urolithin A ama B ma aysan soo sheegin wax saameyn ah oo daran oo ka imanaya maamulka waxyaalahan dheeriga ah
Garcia-Muñoz, Cristina; Vaillant, Fabrice (2014-12-02). "Qaddarka Dheef -shiid kiimikaadka ee Ellagitannins: Saamaynta Caafimaadka, iyo Aragtiyada Cilmi -baarista ee Cuntooyinka Wax -qabadka ee Cusub". Faallooyinka Ba'an ee Sayniska Cuntada iyo Nafaqada.
Bialonska D, Kasimsetty SG, Khan SI, Ferreira D (11 Noofambar 2009). "Urolithins, dheef-shiid kiimikaadka microbial-ka ee rummaan ellagitannins, waxay muujiyaan waxqabad antioxidant awood leh oo ku jira tijaabada unugyada ku saleysan". J Agric Food Chem.
Bodwell, Graham; Pottie, Ian; Nandaluru, Penchal (2011). "Dib-u-dalbashada Elektiroonigga-Diels-Isku-darka Guud ee Isku-darka Urolithin M7".
Urolithin A budada